Steam: Ny lalao narosoko. | Avy amin'ny Linux
Steam: Ny lalao narosoko.
Izy ireo dia Rohy | | GNU / Linux, Games, soso-kevitra
Pikantsary amin'ny fitokonana fanoherana: loharano
Eny, aorian'ny fizaran-taona mampiasa Steam dia heveriko fa fotoana tokony hamoahana ny lisitry ny lalao izay raha ny fahitako azy dia mendrika hividy ho antsika izay mampiasa ny mpanjifa ho an'ny GNU / Linux.
Raha tsy misy resaka lavitra dia manomboka aho.
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, dia nanomboka tamin'ny lalao VALVe par excellence, Half Life.
Amin'ity lalao mahafinaritra ity dia raisintsika ny andraikitr'i Gordon Freeman izay taorian'ny nivoahany tamin'ny fipoahana nandritra ny andrana iray, izay manokatra vavahady mankany amin'ny fiaramanidina iray hafa mba hanafihan'ireo zavaboary mampidi-doza indrindra ny laboratoara any Black Mesa. Gordon dia hiezaka ny hahatratra ny habakabaka ary hamonjy ireo mpiasa raha miady amin'ny zavaboary avy amin'ny fiaramanidina hafa sy ny tafika izay manandrana manakana ny olona rehetra hiala amin'ny vola rehetra, farafaharatsiny velona.
Fitokonana fanoherana: loharano:
Inona no holazaiko momba ny Counter Strike amin'izao fotoana izao, iray amin'ireo lalao lalaovina indrindra amin'ny internet ary miaraka amin'ny Half Life sy Portal dia iray amin'ireo firavaka ao amin'ny VALVe.
Amin'ity lalao ity isika dia ao anatin'ny vondrona anti-mpampihorohoro na mpampihorohoro manandrana mamono ny ekipa mpanohitra, na manandrana mamonjy takalon'aina, mametraka ary manapoaka baomba, sns. Lalao mba hifalifaliana, indrindra raha afaka milalao amin'ny tamba-jotra LAN ianao (inona ireo fahatsiarovana ao amin'ny Cyber ​​milalao miaraka amin'ny mpiara-miasa aminao)
Champios an'ny Regnum:
Tompondakan'ny Regnum dia MMORGP noforonin'ny studio Arzantina. Azontsika atao ny misafidy fanjakana telo, ireo hazakazaka monina ao aminy sy ny kilasy hanatontosana ilay asa fitoriana nanendrena antsika, namono ireo biby goavam-be ary niady tamin'ny fanjakana fahavalo tao amin'ireo faritra mimanda nanafika ny Faritra Ady.
Maimaimpoana ny lalao, saingy afaka mitazona fonosana isan-karazany isika izay manome antsika entana na mividy kristaly amin'ny vola tena izy hividianana entana premium amin'ny lalao.
Iray amin'ireo lalao kintana an'ny VALVe sy lalao tambajotra.
Amin'ity lalao ity dia afaka misafidy ekipa iray isika ary hisafidy ny kilasy samihafa misy, ny tsirairay miaraka amin'ny fitaovam-piadiany sy ny toetrany. Maimaimpoana ny lalao, saingy manana fivarotana ahafahantsika mividy entana isan-karazany hampitaovana ny miaramilanay.
Beat Hazard dia mety ho toa mpitifitra sambo hafa fotsiny, saingy tsy izany. Ao amin'ny Beat Hazars dia samy hafa ny efijery tsirairay satria mamorona efijery tsirairay miorina amin'ny mozika nofidintsika, na izy io no miaraka amin'ny lalao na mampiasa ny mozika ankafizintsika.
Lalao handaniana fotoana sy hametrahana fanamby.
Ary izao no tolo-kevitro hatramin'izao satria misy lalao mbola tsy nivoaka, na hoe mbola tsy afaka nanandrana aho (fa tsy manam-bola hividianana izay tadiaviny ny olona)
Avelako ianao miaraka amin'ireo rohy mankamin'ny pejy ao amin'ny magazay, amin'ny mombamomba ahy (raha sanatria ka te hanampy ahy ianao) ary amin'ny vondrona Hispanika Linux ka izay rehetra te ho anisan'ity vondrona ity dia ho an'ireo izay mampiasa ny mpanjifa Linux miteny Espaniôla.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Steam: Ny lalao narosoko.
Tsy hitako ny DOTA 2… ilay zavatra CounterStrike… .. tsara
Ny DOTA 2 dia tsy an'ny Linux.
lol1nux dia hoy izy:
ity ho an'ny linux o_O fa ny beta ... Mihevitra aho xD
Mamaly an'i lol1nux
Tsia, nivoaka maharitra herinandro vitsivitsy lasa izay.
Mbola tsy nilalao betsaka momba izany aho ka tsy hanao hevitra intsony izao
Pfffu fa mavesatra ianao amin'ny p ... dota, misy lalao tsara kokoa tokony halefa alohan'izay, ny iray amin'izy ireo dia COUNTER GO ary havia ho an'ny maty, koa te-hahita seranan-tsambo vitsivitsy toy ny f1 2012, izay ho an'ny mac, ka tsy maintsy mampiasa opengl ianao, tsy tokony ho sarotra ny mitondra seranana.
Miandry ny antsasaky ny fiainana 2 aho miaraka amin'ireo Episodes 2 sy ny Portal.
Tsy maintsy akaiky ny HL2 satria natombok'izy ireo ny beta an'ny HL2: Deathmatch
eX-MDrvro dia hoy izy:
Eny, mahafinaritra ny F1, milalao Dirt ihany koa aho ary maninona tsy manonofy GRID akory :-), te hanana lalao fiara amin'ny linux aho, ny sasany mety feno divay fa tsy mitovy ...
Valio i eX-MDrvro
Ny marina dia tiako, satria hoy ianao hoe mitondra fiara, filàna haingam-pandeha (manana ilay tiana indrindra tadiavina ao ambanin'ny divay aho).
Izay ao anatin'ny karazan-karazan'ny fitondrana fiara sy ny ady ho an'ny Linux (maimaim-poana na tsia) dia vitsy isika.
Raha mba nifehy tsara kokoa ny TORCS sy ny derivatives ...
azonao atao ny manandrana Heroes of Newart (heveriko fa izany no nanoratana azy) mitovy amin'ny Dota izy, fa tsy amin'ny Steam, apetrakao fotsiny, maimaim-poana ...
Manolotra tolotra vitsivitsy amin'ny Steam izy ireo, hiandry azy ireo hamoaka sy hanararaotra manao ny fividianana aho
Ity no nataoko tamin'ny raharaha Counter Strike ary hataoko miaraka amin'i Beat Hazard ato ho ato.
Inona koa, amin'ny fahavaratra, matetika izy ireo dia manolotra tolotra, ka araho hatrany 😉
Ankoatra ireo voalaza ao amin'ny fidirana dia ampiako, ny tontolon'ny goo sy ny trine 2, lalao mahafinaritra izay miasa tanteraka amin'ny Linux, amin'ny vidiny ambany ihany koa.
Satria tiako ny Portal sy Portal 2 handefa azy ireo any Linux, dia hiandry mangina isika 🙁
Te hahafantatra aho raha misy mpitsidika an'ity tranonkala ity milalao tsy tapaka ny Team Fortress 2, manao ahoana ny fahombiazany amin'ny kinova linux an'ny mpanjifan'ny Steam, satria tena ratsy ho ahy izany (raha ny fahitako azy ary miaraka amin'ireo famaritana mitovy aminy dia tsy misy teboka fampitahana eo amin'ny sehatra iray sy iray hafa).
Ny tenako, izany no tsy ananako, ary tiako kokoa ny CS ^^
Hitako tamin'izay fa tsy izaho irery. Misaotra tamin'ny fampahalalana.
BrigaDier Pepis dia hoy izy:
Man, Team Fortress 2 dia mety amiko ary saika ny zava-drehetra amin'ny farafaharatsiny miaraka amin'ny:
- OS: Ubuntu 14.04, Kernel 14.1, mpamily maimaimpoana ho an'ny GPU (Radeon). Niezaka ihany koa aho tamin'ny ArchLinux sy OpenSUSE heveriko fa tadidiko ary tonga lafatra ny zava-drehetra.
Valiny tamin'i BrigaDier Pepis
Rama dia hoy izy:
ny lalao tsy miankina sy karama rehetra, tolo-kevitra tsara izany !!!!
rehefa namaky ny lohateny aho dia nilaza anakampo hoe «... mifofofofo iray hafa izay hanolotra lalao maimaim-poana sy maimaim-poana toy ny Urban terror 4.2, kianja misokatra, kianja vahiny, faritry ny fahavalo wolfenstein, sns sns ....» fa soa ihany fa diso aho !!!!
ny firesahana momba ny rindrambaiko maimaimpoana dia efa azoko antsasaky ny lo
Mamaly amin'ny sampana
Ho troll ve ianao sa adala fotsiny? Ity no hevitra tokana nataoko fa raha manana rindrambaiko maloto sy lohahevitra ianao… Maninona no mamaky lahatsoratra ao amin'ny bilaogy Linux sy Free Software…. ary mampiasa Debian sy kinova Firefox ve ianao?
Mamokatra? Trolleo? Tsy azoko tsara ve ny manesoeso hafahafa noho ireo tononkira?
Na ny iray na ny iray hafa, fotsiny fa tena mampalahelo ahy ny mahita ireo karazana lahatsoratra ireo ao amin'ny bilaogy toa an'ity, raha tsy diso aho dia ampirisihina ny fampiasana rindrambaiko maimaimpoana.
Tsy te-ho tsy mahalala fomba aho, mamoaka karazana fipoahana, ka nanapa-kevitra ny hampiasa fanesoana aho (raha manafintohina olona iray ialako tsiny), mba hanehoako ny tsy fahafaham-poko amin'ireo karazana lahatsoratra ireo izay mamporisika ny fampiasana rindrambaiko amin'ny farany, na mivantana na tsia. tompony amin'ny linux.
Heveriko fa tsy ratsy ny manohana ny linux, saingy tsy mety ny manao dokambarotra ny lalao tompony sy karama satria manana vola ampy hanaovana dokam-barotra izy ireo.
Vola izay tsy ananan'ireo izay manao openarena, fampihorohoroana an-tanàn-dehibe, nexuiz, 0ad, fligtheard, warmux, wesnoth, warzone2100, eo amin'ireo lalao tsara be. Saingy indrisy ho an'ireo, ireo lahatsoratra fampiroboroboana ao amin'ny bilaogy linuxeros, dia zara raha misy rano any an'efitra.
Ralehilahy, nampiasa esoeso aho, saingy ireo lalao ireo dia tsy nandroso tamin'ny resaka finamanana sy sary efa an-taonany, izay efa mandreraka ... maninona raha mampiasa motera misy sary toy ny firaisan-kina na ny hafa izay tratran'ny opengl? raha tokony hanaraka ny quacke…. na araka ny voasoratra.
Tsara ny nanomezanao ny anarana hoe Champios of Regnum, tena MMORGP RvR tena tsara, miaraka amina rafitra fanafihana mahery vaika sy fakana batery, soso-kevitra tanteraka!
Ary manao ahoana ny fandrosoana nefa tsy mandany vola amin'izany? Satria be ny lalao Free2play izay satria tsy mandoa vola ianao dia tsy manan-katao ary manadino zavatra maro.
Eny, tsy afaka milaza aminao aho, zara raha nilalao DOTA 2 sy Team Fortrees 2 (Counter Strike: Source) kokoa aho, ny Tompondakan'i Regnum satria tsy manambola zavatra amin'ny Ny Zone War dia afaka manome daroka tsara anao.
anon dia hoy izy:
Salama, fanontaniana iray, nampidina lalao ho an'ny birao linuxmint kinova 14 XCFE aho ary tsy nitantana ny lalao ka tsy dia tsara loatra ny lalao etona?
misy torohevitra ?.
Mamaly an'i anon
Azonao atao ve ny milaza hoe lalao inona izany?
Ankoatr'izay, efa nojerenao ve fa nahafeno ny fepetra farany ambany indrindra ny PC-nao?
Azonao atao ny mahita ny farany amin'ny takelaka fivarotana eo ambany.
Masina dia hoy izy:
Lalao izay heveriko fa efa nanandrana maro, ary izany koa dia misy amin'ny Steam, dia ny Bastion. Tena currado izy ary mampiala voly. Safidy tena tsara. $ 14.99 izao, saingy matetika izy ireo no mametraka azy io amidy. Lalao iray hafa tsara koa ny Shank 2, izay amidy, $ 3.39. mahafaly
Mamaly an'i Ghost
Manoro hevitra anao aho:
Silent Hill 1-8
Efitra faobe 1-3
Fall Out 3 sy New Vegas.
sns sns ..
lastnewbie dia hoy izy:
Ananako ny CS: Source, ary ny HL2DM, ny TF2 no nisintona azy saingy malaina aho mamita ny fisintomako azy xD
Nividy ny Cubemen aho, lalao kely mampiala voly amin'ny USD 1.24 ihany, nividy ny Bastion tamin'ny eBay aho niaraka tamin'ny promo USD 15.00 maimaim-poana tamin'ny paypal, lakilen'ny etona. Mahafinaritra ny Bastion.
Miandry ny HL2 sy ny vavahady koa ho an'ny orinasa hafa ankoatra ny VALVe hanamboatra ny kinova Linux an'ny lalao.
Manantena aho fa ny Jiro farany METRO dia hivoaka ho an'ny LINUX, fividianana azo antoka 😀
Mamaly an'i lastnewbie
Miala tsiny fa tsy mampiasa fandresena ianao sa?
Na amin'ny linux dia tsy ampiasaiko hilalao lalao izany, tsy hitako fa milahatra ho an'izany.
"Layered" azo antoka fa tsia
Hehehehehe, sangisangy iray, lasa ireo teny.
Misy mahalala ve raha efa azo apetraka amin'ny alàlan'ny Steam ny Knights Spiral?
Tsia, tsy mbola izao ary jereo fa hafahafa ny fananana mpanjifa teratany ho an'ny Linux (voalamina ao Java)
Vao nanontany tao amin'ny forum ofisialy aho, rehefa misy zavatra haiko
karlinux dia hoy izy:
Tsy fantatro ny fomba tsy ahafahanao mametraka ny The Cave sy Serious Sam 3, tongava fa izy ireo no tsara indrindra, raha toa ka somary lafo kokoa noho ny napetrakao ny vidiny.
Mamaly an'i karlinux
Ny efa nosedraiko ihany no napetrako.
Tsy vitako akory ny mihazakazaka sam sam matotra amin'ny intel amin'ny linux, 40000 ny loko hafahafa sy ny endrika mivoaka xD, saingy rehefa mandresy ... marina izany, antenaiko fa ny intel devs no hamaha azy!
Elaela tsy namakiana synopsis ny antsasaky ny fiainana 1 ... inona no fahatsiarovana xD
Raha ny antsasaky ny fiainana dia alefako ho an'ny windows ary ampandehaniko amin'ny alàlan'ny divay (mandeha tsara izany), ary noho izany tsy mandoa ny dolara 8 mendrika aho, angamba tsy nanampy tamin'ny fampitomboana ny fananganana lalao tao amin'ny linux, saingy tsy diso aho ataovy mora azo 😛
vinsuk dia hoy izy:
Tokony ampidirina hazavana haingana kokoa: -S
Mamaly an'i vinsuk
Fotoana fitsangatsanganana dia hoy izy:
Salama, avelako anao ny tranonkala mahafinaritra feno lalao Adventure Time miaraka amin'i Finn sy Jake http://www.juegosfinnyjake.com
Mamaly ny Fotoana Adventure
Mpanoratra: Editor HTML
Manampia hitsin-dalana bebe kokoa amin'ny Dial an'ny hafainganam-pandehan'i Firefox